‘नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजसँग भएका सबै भेन्टिलेटर सकिए’ «
‘नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजसँग भएका सबै भेन्टिलेटर सकिए’
नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजसँग भएका सबै भेन्टिलेटर सकिएको छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर अस्पतालहरुलाई भाडामा दिएर सहयोग गर्दै आएको सर्भिसेजले १५ वटा भेन्टिलेटर वितरण गरिसकेको नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजका संस्थापक डा. विशाल ढकालले बताए । बाँकी रहेका १७ वटा भेन्टिलेटर पनि बुक भइसकेको डा. ढकालले बताए ।
अहिले काठमाडौंसँगै वीरगञ्ज, जनकपुर लगायतका कोरोना संक्रमणबाट धेरै प्रभावित शहरहरुबाट भेन्टिलेटरको माग भइरहेको छ । “उपलब्ध भएसम्म हामीले अस्पतालहरुलाई भेन्टिलेटर दियौँ,” उनले भने, “अब भएका सबै सामग्री सकिएकाले जुटाउन सकस परेको छ,” डा. ढकालले बताए ।
संस्थाले भर्खरै वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताललाई ६ वटा भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेको छ । वीरगञ्जमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था सानो पाइलासँगको सहकार्यमा ती भेन्टिलेटर उपलब्ध गराइएको हो ।
प्रदेश २ कै जनकपुरबाट पनि चार वटा भेन्टिलेटरको माग आएको र ती सामग्री दिने क्रममा रहेको डा. ढकालले बताए । उनले आफुहरुसँग भएका भेन्टिलेटर सकिएकाले इच्छुक व्यक्ति वा संस्थालाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे ।
“भेन्टिलेटर नपाएर सुत्केरीले पनि अस्पताल–अस्पताल धाउनु परेको छ, कतिको त्यहीक्रममा ज्यान गएको छ । भेन्टिलेटरको अभावमा कसैको पनि ज्यान नजाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,” डा. ढकालले भने, “सहयोग गर्न चाहनेले हातेमालो गर्न सक्नुहुन्छ ।”
नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेज का पाँच जना संस्थापकमा डा. ढकालसहित पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सघन उपचार विभागका प्रमुख प्रा.डा. सुवास आचार्य, लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक निरञ्जन क्षेष्ठ र समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दिपेन्द्र चौलागाई छन् । संस्थाका पाँचजना संस्थापकले आफै रकमको जोहो गरेर यूरोपबाट भेन्टिलेटर खरिद गरेर ल्याए । नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजले कोरोना महामारीबाहेक अरु बेला पनि सघन उपचार सेवा विस्तार गर्न सहयोग होस् भनेर चाहिएका सबै ठाउँमा भेन्टिलेटर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
रोबोटको सहयोगमा पहिलो पटक क्यान्सरको शल्यक्रिया गरियो
गत साता २ पटक मुश्किलले बच्यो पृथ्वी, नजिकैबाट गुज्रिएको थियो छुद्र ग्रह
एनआरएनए आईसीसीको दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन सकियो
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन सकिएको छ
विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट विदेशमा थप १ जना नेपालीको निधन भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ भएका छन् । केही दिन पहिला कोरोना
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल, अस्पताल जान मानेनन्
जुम्ला-चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै सत्याग्रह बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्यकर्मीमा बढी देखिन थालेको छ । मुलुकभर कोभिड–१९ को सङ्क्रमित
भिम अस्पताललाई ५० शैय्याको बनाइने
भैरहवा– प्रदेश ५ सरकारले भैरहवास्थित भिम अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको छ ।